Viber Messenger - Messages, Group Chats & Calls 11.3.1.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 11.3.1.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Application မ်ား ဆက္သြယ္ေရး Viber Messenger - Messages, Group Chats & Calls
Viber Messenger - Messages, Group Chats & Calls ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Viber ကိုအခမဲ့, ရိုးရှင်းသောအစာရှောင်ခြင်းနှင့်လုံခြုံမှုအရှိဆုံးစာပို့ခြင်းဖြစ်ပြီး app ကိုခေါ်ဆိုခြင်း။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘီလီယံကို 1 ကျော်အသုံးပြုသူများအတွက်ရွေးချယ်မှု၏တမန်! အခမဲ့ယခုစာသားနဲ့အရည်အသွေးမြင့်ကျောက်သလင်း-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှု။
Viber ကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သင်လိုအပ်အားလုံးဒေတာအစီအစဉ်သို့မဟုတ် Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အသငျသညျသှားဖို့ကောင်းသောပါပဲ။ အခမဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့, အုပ်စုတစုကို chat ဖွင့်လှစ်ခြင်း, ဤမျှလောက်ပိုပြီး! နေပါစေသူတို့ဖြစ်ကြသည်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ထံမှများမှာဘယ်မှာဘယ်သူလူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ယနေ့ Viber ကို Download လုပ်ပါ။
အဘယ်ကြောင့်သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံး messaging app Viber ကိုဖြစ်သနည်း
အပြည့်အဝထပ်တူပြုထားသည့် Desktop နဲ့ Tablet ကို Apps ကပ
Viber ကိုအပြည့်အဝကိုသင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်လက်တော့င့်က်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုမြင်ရ, သင်၏ desktop သို့မဟုတ်အန်းဒရွိုက်တက်ဘလက်ကနေတိုက်ရိုက်သူတို့နှင့်အတူ chat လို့ရပါတယ်။
အခမဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုမှကြည်လင်-ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသံနှင့် instant ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု Make!
Viber ကိုအထဲကအတူ landline မှအနိမျ့-ကုန်ကျစရိတ်ခေါ်ဆိုမှုများ Make
ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်, Non-Viber ကိုအသုံးပြုသူများသည်သို့မဟုတ်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ် Viber ကိုအထဲကရဲ့တန်ဖိုးနည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခေါ်ဆိုမှုဝန်ဆောင်မှုနဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းမရှိပါဘူးသူမည်သူမဆိုကိုခေါ်ပါ။
ထိတွေ့တည်းခိုပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှသိရသည်။ အခမဲ့စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ, ဓာတ်ပုံ, တစ်ဦးစတစ်ကာသို့မဟုတ် GIF, ဗွီဒီယိုတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားဖိုင်မျှဝေပါ။
တစ်ဦးအုပ်စု Chat ကိုဖွင့်ပါ
အထိ 250 အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချက်တင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်သူငယ်ချင်းမိသားစုနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူတက်ဖမ်း။
ချတ်နှင့် 100% သီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့်အတူ Call
encryption ကို-to-end အဆုံးသတ်ရန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင် Viber ကိုအပေါ်ကိုမျှဝေသတင်းအချက်အလက်မဆိုအမျိုးအစားအမြဲကိုယ့်ကိုယ်နှငျ့သငျဖို့ပြောနေတာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကြားတည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ သင်ပို့မဆိုသတင်းစကားကိုလက်ခံသူရဲ့သာ၎င်းတို့၏ device ကိုစာဝှက်စနစ် key ကိုသုံးပြီးစာသားမှဘာသာပြန်ဆိုနိုင်မစာဝှက်ထားတဲ့ကုဒ်၏ပုံစံအတွက်ရန်သင့် device မှယင်း၏လမ်းစေသည်။ encryption key တွေကိုဘယ်နေရာမှာအခြားအသုံးပြုသူကိရိယာများပေါ်တွင်သာတည်ရှိနေသည်။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမ - မရတောင်မှ Viber ကို - သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်လို့ရပါတယ်။
သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ပါပြီးနောက်, ကအလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့လက်ခံရရှိသူရဲ့ဖုန်းမှဖျက်ပစ်မယ့်နိုင်အောင်သင်သည်သင်၏စကားပြောဆိုမှုအတွက်တိုင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုများအတွက် Self-ဖျက်ဆီး timer ကိုသတ်မှတ်ပါစေလိမ့်မယ်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက် Chat ကိုစတင်ပါ။
စကားများသာဤမျှလောက်ပြောနိုင်! GIF များနှင့် Viber ကိုစတစ်ကာ Market ကနေ 35000 ကျော်စတစ်ကာများ၏အဆုံးမဲ့ကျော်နှင့်သင်၏တိုင်းစိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြ။
Unlimited အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူတစ်ဦး Viber ကိုအဝန်း Start
အဘယ်သူမျှမကိစ္စသငျသညျကိုစိတ်ဝင်စားနေသည်အဘယ်အရာကို, သင်ယခုသင့်ကိုယ်ပိုင် Viber ကိုအဝန်းစတင်နိုင်ပါသည်! လူတွေတစ်ဦးန့်အသတ်အရေအတွက်အကြောင်း shared ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်။ အရင်ကထက်ပိုပြီး admin ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်စကားဝိုင်းအသစ်ပျော်မွေ့သငျသညျအပေါငျးတို့သရိုက်ချက်များကိုခေါ်ရရှိရာထူးခြားတဲ့ချက်တင်အာကာသအတွင်းပါရှိပါတယ်။
Chat ကို Extensions အသင်၏စကားပြောကြွယ်ဝစေ
လွယ်ကူသောသင်အကြိုက်ဆုံးလင့်များ, GIF များနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်, Yelp, Youtube, Books, Spotify နဲ့ပိုပြီးအပါအဝင်အသုံးဝင်သော Chat ကို Extensions အမျိုးမျိုးနှင့်အတူအမွှေးအကြိုင်တက်သင့်စကားဝိုင်းများ။
Subscriptions In-app ကိုဝယ်ယူနှင့်သင့်မည့်အစီအစဉ်အပေါ် မူတည်. လစဉ်သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်သက်တမ်းတိုးထားတဲ့တိကျတဲ့ဦးတည်ရာကို, ဖုန်းဆက်ဖို့မိနစ်တစ်ဦးအစုအဝေးများမှာထဲက Viber ။ သငျသညျ play စတိုးကနေတဆင့် subscribe အကယ်. ဝယ်ယူအတည်ပြုခဲ့သည်သောအခါငွေပေးချေမှုသင့်အကောင့်မှတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ Auto-သက်တမ်းတိုးဖို့မဟုတ်လျှင်အလိုအလြောကျသက်တမ်းတိုးဖို့ subscriptions ကိုအနည်းဆုံး 24 နာရီကြာလက်ရှိကာလ၏အဆုံးမတိုင်မှီပိတ်ထားသည်။ သင့်အကောင့်ကိုသင်ရွေးချယ်ထားသောအစီအစဉ်၏နှုန်းမှာလက်ရှိကာလ၏အဆုံးမတိုင်မီ 24 နာရီဤသက်တမ်းတိုးတက်ဘို့တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ subscription ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သင့်ရဲ့ device ပေါ်မှာသင့် Play Store မှာအကောင့် settings ကိုသွားနေဖြင့်မည်သည့်အချိန်က Auto-သက်တမ်းတိုးကို turn off နိုင်ပါတယ်။
မျိုးစုံအဆက်အသွယ် * အသံလွှင့်မက်ဆေ့ခ်ျ
သင့်ရဲ့အုပ်စုတစ်စု၏မျက်နှာပြင်၏ထိပ်မှ * Pin မက်ဆေ့ခ်ျ
* အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချက်တင်အတွင်းမည်သည့်တိကျသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုမှ Reply
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ * ချိန်းအဆက်အသွယ်
Viber ကိုပု Rakuten အုပ်စု, e-commerce နဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Viber ကိုအခမဲ့ Messenger ကို Now ကို Install လုပ်ပြီးချိတ်ဆက်ခြင်း Start!
Viber Messenger - Messages, Group Chats & Calls အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Viber Messenger - Messages, Group Chats & Calls အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Viber Messenger - Messages, Group Chats & Calls အား အခ်က္ျပပါ
Viber Messenger - Messages, Group Chats & Calls ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Viber Messenger - Messages, Group Chats & Calls အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 11.3.1.1
ထုတ်လုပ်သူ Viber Media Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.viber.com/privacy
App Name: Viber Messenger - Messages, Group Chats & Calls
လက်မှတ် SHA1: F8:36:A6:6F:87:79:78:5D:51:93:35:47:A1:04:8C:2E:42:AD:AB:9E
အဖွဲ့အစည်း (O): Viber Media
Viber Messenger - Messages, Group Chats & Calls APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ